हाम्रो बारे - डोङ्गुवान Sweetoy इलेक्ट्रनिक कं, लिमिटेड
उनको लागि खेलौना
उहाँलाई लागि खेलौनाहरू
जोडे अनि खेल
अनुकूलन तपाईंको ब्रान्ड
उपहार र कार्ड
Sweetoy एक एकीकृत उद्यम को संयोजन को संयुक्त छ। यहाँ तपाईं आफ्नो डिजाइन व्यावहारिक र सबै एक छत मुनि केहि शीर्ष बिक्री सोर्सिंग बनाउन सक्छ।
2013 मा स्थापित, हामी सरोष वयस्क उद्योग केन्द्रित छ। हामी के र केवल शीर्ष गुणवत्ता सेक्स खिलौने र सम्बन्धित उत्पादन, Sweetoy गर्न धेरै विशेष बिक्री छिटो आपूर्ति बेच्छ थाहा छ। हामी स्वतन्त्र डिजाइन र आर एन्ड डी टीम, एक अवधारणा, साथै बाहिरी प्याकेज डिजाइन आफ्नो ब्रान्ड अनुकूलन गर्न मदत गर्ने छ। तपाईं भन्नुभयो हुनुपर्छ धेरै पटक कि अनुकूलन प्याकेज कम्तिमा 500pcs प्रत्येक मोडेल आवश्यक छ, unbeatable, हाम्रो अनुकूलन सेवा MOQ मात्र 100pcs छ। कुनै एक यो राम्रो गर्न सकेन। हामी समर्पित, हात मा टोलीले शुरू, बस साइन अप गर्न मद्दत गर्न र तपाईं नै दिन व्यापार गर्न सकिन्छ। तपाईं निर्देशन वा सल्लाह को आवश्यकता मा हुनुहुन्छ भने, हामी पनि, यो सेवा सबै भाग हो प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
के हाम्रो सेवा राम्रो बनाउँछ?
वेबसाइट सुविधाहरू प्रयोग गर्न र पीडीएफ सूची तपाईं सीधा सबै वस्तुहरू brows मदत गर्नेछ डाउनलोड गर्न हाम्रो सजिलो। बदलामा धेरै प्रश्नहरूको लागि जांच र प्रतीक्षा पठाउन आवश्यक छैन। बस आफ्नो कम्पनीको नाम र इमेल संग साइन अप समय धेरै बचत हुनेछ।
पुरस्कार जित्न सेवा - हामी हाम्रो ग्राहकहरु गर्न impeccable सेवा प्रदान गर्न र पनि यसलाई लागि पुरस्कृत गर्न सक्षम हुन गर्व हुनुहुन्छ! हाम्रो ग्राहकहरु बनाउँछ के अनुभव गर्न आज खाता लागि साइन अप। हाम्रो वितरण पटक बस unbeatable स्टक items-- 1-3 दिन अनुकूलन वस्तुहरू बाहिर जहाज गर्न सक्छन् - 7-10 दिन बाहिर तेज जहाज गर्न सक्दैन। व्यापार सर्तहरू तपाईंलाई निर्भर छन्, EXW, एफओबी, सीआईएफ, DDU ... सबै उपलब्ध छैन। आफ्नो साइट डाउनलोड - वेब साइट पाउनुभयो? हाम्रो डाउनलोड पृष्ठ डाटा फीड र तस्बिरहरू आफ्नो साइट कायम गर्न मद्दत गर्न पाइन्छ।
Sweetoy कं, लिमिटेड
Str 01, Nanzhou गाउँ, MaYong टाउन Dongguan, Gaungdong 523000, चीन
एक बहु-श्रेणी वयस्क उत्पादन खोज्दै हुनुहुन्छ?
तपाईंको आफ्नो ब्रान्ड अनुकूलन गर्न चाहनुहुन्छ?
तपाईंको आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन गर्न सोच?
आज हाम्रो एउटा इमेल ड्रप लागि एक-स्टप समाधान!
Strap On Dildo, Nipple Sucker, छडी Vibrator, जोडे लागि सेक्स खेलौना , Best Sex Toys For Men, Sex Swing,